डिजेल लोड गरिएको ट्यांकरै चो’री, कसले चो’र्यो त?:: Mero Desh
डिजेल लोड गरिएको ट्यांकरै चो’री, कसले चो’र्यो त?
Published on: १५ भाद्र २०७८, मंगलवार ०१:४६
विराटनगर :डिजेल लोड भएको ट्यांकर विराटनगरबाट चो’री भएको छ।विराटनगरस्थित नेपाल आयल निगम नजिकको पार्किङबाटै डिजेलसहितको ट्यांकर चो’री भएको हो।इन्धनसहितको ट्यांकर चो’री भएको यो घ’ट’ना भने पहिलो होइन। यसअघि पनि आधा दर्जनको संख्यामा इन्धनको ट्यांकर चो’री भएको घ’ट’ना सार्वजनिक भइस केका छन्।
यसअघि अघिल्लो वर्ष बाराको अमलेखगन्जबाट धनुषा तर्फ डिजेल लैजाँदै गर्दा ट्यांकर चो’री भएको थियो।चो’री भएको ट्यांकरबाट ४ हजार लिटर डिजेलसमेत गायब बनाइएको छ ।निगमको १ नम्बर प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता दिवश विष्टका अनुसार, डिजेल लोड गरेर पार्किङमा
राखिएको ना ४ ख ४६९ नम्बरको ट्यांकर सोमबार मध्यरातिबाट चोरिएको हो। अमलेखगन्ज डिपोबाट डिजेल लोड गरेर राति साढे १२ बजे उक्त पार्किङमा ट्यांकर राखेर चालक यामकुमार खनाल सुत्न गएका थिए विष्टका अनुसार चालक खनालले ट्यांकरको साँचो र सुरक्षाको जिम्मेवारी सहचालक शिव खनाललाई दिएर सुत्न गएका थिए।
उनकाअनुसार आगलागी वा कुनै भवितव्य घ’ट’ना हुन नदिन आपत्कालीन अवस्थाका लागि अनलोड हुन बाँकी रहेको ट्यांकर पार्किङ गरिँदा चाबी पनि त्यहीँ छाड्ने गरिन्छ। ‘सहचालक शौचालय गएको मौकाको फाइदा उठाउँदै ट्यांकर चो’री गरी त्यसबाट ४ हजार लिटर डिजेल नै गायब बनाइयो,’ विष्टले भने।
उनका अनुसार शौचालयबाट फर्किंदा सहचालक खनालले पार्किङबाट उक्त ट्यांकर हराएको जानकारी गराएका थिए। सहचालक खनालले तत्का लै निगम र प्रहरीलाई ट्यांकर चो’रीको घ’टना’बारे जानकारी दिएका थिए। ट्यांकरमा २० लाख मूल्यभन्दा बढीको २० केएल (२० हजार लिटर डिजेल) लोड थियो।
डिजेलसहित चो’री भएको उक्त ट्यांक र गुडाएर लैजाने क्रममा प्रहरीले मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिका—३ स्थित बाँसबारीबाट सोमबार बिहान १ बजेर ४० मिनेटमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । ट्यांकरसँगै विराटनगर–४ का २६ वर्षीय श्रवणकुमार यादवलाई पनि प’क्रा’उ गरिएको छ। निगमका प्रवक्ता विष्टकाअनुसार प’क्राउ परेका यादव निगमकै ट्यांकर चलाउने पूर्वचालक हुन्।
यादवले करिब ४ महिनाअघि मात्रै चालकको काम छाडेका हुन्।‘ निगमकै पूर्वचालक भएकाले पार्किङ गर्दा ट्यांकर कसरी राखिन्छ भन्ने विषयमा उनलाई पूर्ण रूपमा जानकारी थियो,’ उनले भने , ‘सबै जानकारी भएको आधारमा डिजेल लिएर आइपुगेको केही बेरमै यादवले चो’री गरी ट्यांकर लगेको पाइयो।’
निगमका अनुसार श्यामकृष्ण ढुवानी सेवाले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त ट्यांकर इन्धन ढुवानी व्यवसायी सञ्जय गुप्ताको हो। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठकाअनुसार ट्यांकर गु डाएर करिब ४ किलोमिटर टाढा उत्तर दिशामा पुर्‍याएको अवस्थामा ट्यांकरसहित यादव लाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
तत्कालै नियन्त्रणमा लिन सकिएकाले ट्यांकर अन्यत्र लान असफल भएको उनले बताए। ट्यांकर नियन्त्रणमा आए पनि इन्धनको विषयमा छानबिन हुँदा त्यसबाट १ च्याम्बर को ४ हजार लिटर चो’री भइसकेको फेला परेको थियो। विष्टकाअनुसार ट्यांकर चो’री गरी करिब १ घण्टाको अवधिमा डिजेल गायब बनाइएको हो।
एउटा ट्यांकरमा इन्धन राख्न ५ च्याम्ब र हुन्छ । एउटा च्याम्बर ४ हजार लिटर क्षमताको हुन्छ। ‘५ वटै च्याम्बरमा डिजेल हुनुपर्नेमा एउटा च्याम्बरको सम्पूर्ण डिजेल गायब भएको छ, ’ विष्टले भने, ‘यो घ’ट’नाला ई निगमले गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ।’